सुशान्तको तस्बिरले सजिएको छ पूर्वप्रेमिका अंकिताको घर (तस्विरसहित) – Enepali News
July 1, 2020 191
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुशान्त राजपुतको निधन भएको १५ दिन भन्दा बढी भइसकेको छ । उनको निधन पछि उठेको एक वहसले अहिले पनि सुशान्तको हरेक पाटाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । गत जुन १४ मा आफ्नै घरमा झु न्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । उनी पवित्र रिस्ता नाम गरेको धारावाहिकवाट कलाकारितामा प्रवेश गरेका थिए । उनको को स्टारका रुपमा थिइन् अंकिता लोखण्डे ।
लामो समय काम गरेका उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध पनि स्थापित भएका थियो । उनीहरु करिब ७ वर्ष प्रेम सम्बन्धमा थिए । तर पछि सुशान्त सानो पर्दावाट ठूलो पर्दा तिर ब्यस्त हुन थाले । उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध पनि छुट्यो । सुशान्त आफ्नै जिवनमा ब्यस्त हुन थाले । अंकिता र सुशान्तको कुराकानी पनि हुन छोडेको थियो । तर सुशान्त आफ्नो जिवनमा ब्यस्त भइरहँदा करिब ७ वर्ष सम्म प्रेममा रहेकी अंकिताले भने सुशान्तलाई विर्सन सकेकी थिइनन् । भनिन्छ सुशान्तको जिवनमा रिया चक्रवती आइसकेकी थिइन् । तर अंकिता भने सुशान्तसंगको प्रेम छुट्दा जहाँ थिइन् त्यही उनलाई सम्झदै बसेकी थिइन् । उनले सुशान्तसंगको प्रेम छुटेपछि पनि उनीसंग जोडिएका धेरै चित सम्हालेर राखेकी थिइन् । सुशान्तको निधन पछि अंकिताले ति सामान सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सुशान्तको सम्झनामा राखेका वस्तुहरुको अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
सुशान्तको निधन पछि बलिउडमा परिवारवादको विषयमा वहस सुरु भएको हो । जसका कारण सुशान्तले बलिउडमा अवसर नपाएको, ७ महिनाको अवधिमा ६ वटा फिल्म उनको हातवाट गएको र परिवारवाद संग जोडिएकाहरुले उनको वहिष्कार अभियान नै सञ्चालन गरेको भन्दै वहस सुरु भएको हो । जसका कारण सुशान्तले जिवन त्याग्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसरी उनलाई वहिष्कार अभियान चलाउनेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । उनको निधन पछि उनीसँग जोडिएका तस्बिर, सम्बन्ध तथा उनले गरेका राम्रा कामहरुको प्रशंसा भइरहेको छ । साथै, उनका यादमा उनका प्रशंसकहरुले निकै पीडा समेत पोखिरहेका छन् ।
यसैबीच, उनकी पूर्वप्रेमिकासँगको सम्बन्धको चर्चाले पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । सुशान्तका एक प्रशंसकले उनकी पूर्वप्रेमिकाको एउटा पुरानो तस्बिर शेयर गरेका छन् । तस्बिरमा अंकिता लोखण्डे आफ्नी आमासँग देखिएकी छिन् भने उनको पछाडि घरका भित्ताहरुमा सुशान्तसँगका तस्बिरहरु टाँगिएका छन् । यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । तस्बिर हेर्नेहरुले सुशान्त र अंकिताबीच गहिरो प्रेम रहेका प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
Prevहिमालय एयरलाइन्सका एक जना पाइलटलाई कोरोना संक्रमण
Nextहङकङमा निर्माण क्षेत्रमा एक नेपालीको मृत्यु
सन्तान नहुनेलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन गरि महिमा पढ्नुहोस
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल
पहिलोपटक काठमाण्डौमा ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटीए
जीवन काँडाकी फूलकी लेखक झमकलाई गरियो १ करोड ८० लाखमा बनेको घर हस्तारण
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3478)
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2660)
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2315)
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (2057)
तपाईंको यो वर्ष कस्तो हुँदैछ ? हेर्नुहोस् ओजराज उपाध्यायले लेखेकाे वार्षिक राशिफल (2023)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1755)
ट्रम्प भन्छन् अब कोरोना निको पार्ने औसधि बनिसक्यो (1730)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1642)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1562)